Igwefoto n'ihu nke Huawei P30 usoro na-anabata ọnọdụ abalị | Gam akporosis
Usoro Huawei P30 na-enweta ọnọdụ abalị na igwefoto ya n'ihu maka OTA ọhụrụ
Huawei onye na-emepụta China na-ewepụta a ọhụrụ OTA melite maka Huawei P30, ma ọ bụghị gụnyere ndị Lite dị iche iche. Onye a na - enweta ọtụtụ ndozi na ndozi, mana na - agbakwụnye ihe na - atọ ụtọ nke ọtụtụ na - atụ anya ya.
El foto foto nke P30 na P30 Pro e toro ma debe dịka nke kachasị mma, kemgbe mmalite nke ngwaọrụ abụọ a dị elu. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-emeziwanye na mmelite ọ bụla nke ụlọ ọrụ ahụ nyere, mana ọ bụghị igwefoto onwe ya. Iji mezuo nke ikpeazụ, ihe mmetụta ahụ na-egosipụtazi ọnọdụ abalị a na-ahụkarị nke ika ahụ maka ịse foto na ọnọdụ ọkụ dị ala.
The Huawei P30 selfie shooter bụ 32 MP nwere oghere f / 2.0, mgbe nke P30 Pro bụ otu mkpebi na otu njirimara. Ya mere, pikselụ nke ndị a bụ 0.8 microns ... Ebe ọ bụ na anyị na-ele otu kamera ndị ahụ, ọ ga-ekwe omume ụlọ ọrụ ahụ mejuputa ọnọdụ ọnọdụ abalị na ngwaọrụ abụọ n'otu oge, ma lee anyị.
Mmelite ohuru nke onu ogugu abuo a na anata ji nwayọọ nwayọọ na-agbasasị. Nke a bịara dịka EMUI 9.1.0.193 na, na mgbakwunye na ịgbakwunye 'Night Mode', ọ na-emetụta ọrụ mmezi vidiyo ọhụụ ma melite arụmọrụ nke akara mkpisiaka. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ OTA zuru oke nke ga-amasị ndị ọrụ niile nke ekwentị ndị a.
Ọzọkwa, n'aka nke ọzọ, weta ihe nchekwa nche site n'August afọ a, nke na-enye gị ihe nchebe nke na-echebe gị pụọ na adịghị ike ọhụụ. E wezụga, n'ozuzu usoro arụmọrụ nke a ụzọ na-ukwuu erite uru dị ka nke ọma.
Huawei P30 Pro, ihe karịrị igwefoto obi ọgụ [Nyochaa]
Cheta na inyochaa ma ọ bụrụ na ị nwere ike ibudata ma wụnye ngwungwu ngwa ngwa ọhụrụ ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ịnweta Nhazi> System> Mmelite ngwanrọ> Lelee mmelite. Tupu ịmalite ịmalite nbudata -ma ọ bụrụ na ị natara ya-Anyị na-akwado ịnwe ngwaọrụ ejikọrọ na netwọk Wi-Fi na ngwa ngwa nwere ọkwa batrị dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Usoro Huawei P30 na-enweta ọnọdụ abalị na igwefoto ya n'ihu maka OTA ọhụrụ
Etu esi ihu ókè oghere WhatsApp gị na-ebi
Samsung ga-ebido ekwentị batrị graphene na 2020